Barcelona Oo Noqotay Kooxda Lacagtii Ugu Badnayd Ka Heshay Champions League 2018/19 Iyo Sababta Ay Uga Badsatay Liverpool - Gool24.Net
Barcelona Oo Noqotay Kooxda Lacagtii Ugu Badnayd Ka Heshay Champions League 2018/19 Iyo Sababta Ay Uga Badsatay Liverpool
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lacagtii ugu badnayd ka heshay tartanka Champions League xili ciyaareedkii tegay ee 2018/19, kaaas oo ay kaga hadhay wareegga semi-finalka.
Barcelona ayaa heshay lacag dhan 117 milyan oo Euro, waxaanay ka badsatay Liverpool oo koobka ku guuleysatay, isla markaana kusii reebtay wareegga afar-dhamaadka ka hor intii aanay finalka ugu tegin Tottenham oo ay ku garaacday 2-0.
Kooxda Ernesto Vlaverde ayaa lacagta ku heshay kaalinta ay kaga jirto qiimaynta UEFA iyo xuquuqda baahinta telefishannada, kuwaas oo ka dhigay lacagta ay heshay tan ugu badan kooxihii ka qayb-galay tartanka xili ciyaareedkii hore.
Liverpool ayaa kaalinta labaad soo gashay, kana heshay lacagtii ugu badnayd oo ahayd 111 milyan oo Euro.
Farqiga labada kooxood is-dhaafiyey ayaa waxa uu ahaa in qiimaynta UEFA ay Barcelona ku heshay 34 milyan oo Euro, halka Liverpool ay ku heshay 23 milyan oo Euro.
Tottenham ayaa saddexaad soo gashay oo la guddoonsiiyey lacag dhan 101 milyan Euro.
Juventus oo afraad ah waxay heshay 95 milyan uero, Manchester United (93m euros), Manchester City (93m euros), PSG (85m euros), Real Madrid (85m euros), Atletico Madrid (85m euros) iyo Bayern Munich (82m euros).
Ajax oo soo gaadhay wareegga semi-finalka ayaa waxay heshay 78 milyan, waxaana saamaynta ugu badan ku yeeshay baahinta telefishannada oo aanay helin saami la mid ah kooxaha kale.